Date My Pet » The 5 Big Dating Pazvikanganiso Kuti Women Make
Last updated: Jan. 21 2021 | 5 Maminitsi verenga
Uri nguva dzakaipa nokufambidzana nomumwe?
Unoda sokuti kuenda yakawanda yemichindwe kutaura mijenya varume paIndaneti asi haana sokuti iwe kuti akwirwe kana kusangana nomunhu wako?
Kana zvakadaro zvichida uri kuita mumwe kana kupfuura '5 Big Dating Pazvikanganiso'. Heano 5 Big Dating Pazvikanganiso kuti vakadzi vaite, uye zvokuita pachinzvimbo.
1. Approach Dating With An Agenda
Naizvozvo vazhinji vakadzi vangu vatengi aikwezva kufambidzana nomunhu wenyaya uye rinoshanda zvechokwadi pamusoro pavo uye kubudirira kwavo nomumwe munhu. Vari kutsvaka murume wavo, uye kana vasingakupi kumuona pakarepo chero wevarume kuonana navo murume chinozadzwa acharega pakarepo uye zvakanyorwa kure pasina mukana mumwe musi wokuongorora kubatana (kana kushaya kwayo) mberi. Uye kana vanoita vasvike dating pachikuva, mukadzi anotakura kuti yekukurudzira zuva ravo sezvo zvakanaka zvishoma pane nemigumisiro zvinogutsa.
Zvingaita sezvinoshamisa counterintuitive kutaura havana chinangwa apo kudanana, pashure zvose zvirokwazvo chikonzero yose isu nomumwe ari kusangana 'murume wako' zvakanaka? Zvakanaka hongu uye kwete. Pakupedzisira uye yakareba ichi ndicho chishuvo, Zvisinei iwe zvikuru kuderedza mikana yako wokusvika ichocho kana iwe aikwezva kufambidzana nomunhu wenyaya. Panguva iyi iri mutambo zviri nani kuti kuona kufambidzana nokuti chii - mukana kusangana uye kumativi nhengo vasikana kuti kofi, anofamba, nokungotaura zvichingodaro. Uyai vanhu - Rinongova DATE - kwete muchato yebasa, saka ngatitaurei kuzorora zvishoma uye kubata zvakadaro. Hazvina kudaro musoro maonero kutarisira kuti unogona kuziva kana mumwe munhu upenyu hwako naye kubva imwe musangano iri rakagadzirwa nevanhu marongero.
Kana uchiziva matauriro yangu kudanana vakadzi muchaziva I vanokurudzira kudanana sezvo mushonga nokuti pasava zvakaipa ukama masaisai. Zvisinei kupfuura zvokufambidzana ichi ndechedu kuva kunakidza uye chiedza unovhunduka. Kana ukaenda ane wenyaya nezvokuwana kana iri murume wako izvozvo unoisa savi zvavaida yose ezvinhu, uye zvinoreva kuti iwe kana zuva achakwanisa kuzorora uye afarire ruzivo. Haungatyi kukwanisa kuva zvaunogona nokuzvidzora uye haangarambi. Saka rega wenyaya uye kuti imwe itsva - kuva itsva, kunakidza uye chiedza mikukutu zvakaitika itsva vanhu.
2. Ushe Men Out Hahuna Nokukurumidza
Sezvakaitwa yokutanga chikuru chikanganiso, chikanganiso 2 ndeimwe nzira kuti vakadzi vachafura pachavo vari rutsoka apo kudanana. Vakadzi vazhinji wokumavirira munzanga yanhasi vari kutongwa 'kemisitiri' vanonzwa panyaya pakusarudza vavo nevarume, uye ndinoona ichi kuwana muvira zvemarudzi ose dambudziko nguva nenguva zvakare. Chemistry ruchigona kuva murombo chokukomborerwa kana munhu raizova rakanaka naye kwamuri. Kutaura zvazviri zvikuru kemisitiri kazhinji yambiro chiratidzo vakadzi vasina akaita ukama makuru sarudzo kare. Kazhinji varume vakanaka vanogona kuti zvachose kufuratirwa nokuti huta uye uchinyara musi iwoyo wokutanga uye havana bhegi rokuenda punchi ari kemisitiri dhipatimendi. Nokuti vakadzi kukwezvwa inogona kukura pamusoro nguva munhu akanaka. Naizvozvo ipai kuti kusagadzikana kana yakanyarara murume mumwe mukana, kupa chokwadi iye pfupi misi anoverengeka uye ona kana asingadzisuki kubuda goko rake iwe mudzokere kunyika anokwezva murume, zvichida kunyange 'murume wako'. Usanetseka kana unogona kufungidzira kuti iye zvino (ona chikanganiso 1).
3. Kuswedera The Date With achifanira kuongorora ndege
chikanganiso 3 zvakafanana vanokanganisa 1 uye sezvo inokuvadza, kana asina kuipa. Ndinoziva kuti vakadzi vakawanda vane wakapinza 'kuongorora' kwounhu kuti vanoda (kana kufunga vanoda) munhu. Hapana chakaipa kuwana pachena pane zvaunoda yenyu yakanaka mudiwa vevakadzi, Zvisinei ngatiendei kupinda chokwadi edu mazita nokuti vamwe vacho kwakakwana maturo uye havasi kushumira zvachose!
The Pamazita kazhinji refu chaizvo uye kazhinji ine zvinhu ikoko kuti chaizvoizvo nezvavanoda zvikapesana pachavo! Somuenzaniso iye ave 'vakadzikama uye musana' kodzero pedyo 'wakazadzwa nesimba'. Zvino Handirevi kuti haukwanisi kuva unhu vose mumwe munhu, kungotadza kuti kazhinji munhu ruchigona kurutivi umwe. Saka riri naro? Uyewo mazita edu dzimwe nguva tine zvinhu zvokuti sezvisingakoshi, akadai 'nyora' kana 'tsandanyama'. Huyai vevakadzi! Hapana chakaipa nekuva mumuviri zvatinofarira asi chaizvoizvo uri kuenda kusarudza upenyu hwako naye nokuti ane ingi pamuviri wake? Unofunga kuti izvi achakutongera zvakanaka ukama hwako? Zvakadini nounhu zvinonyatsokosha, hwakadai sekutendeseka, kuvimbika, mutsa, simba (pfungwa) zvichingoenda zvakadaro?
mukadzi mumwe nomumwe anofanira kusarudza kuti chii zvakakosha kwaari. Zvisinei nguva nenguva zvakare ndaona ndandanda kuti kunze apo mumwe mukadzi pakupedzisira asangana hwake naye, uye ndiye kazhinji akasiyana zvachose kuti munhu akanga ari pasi! Uye anofara. Saka zano rangu - kudzingira kunze pachikwata! kana, kana unofanira kuva nacho, kucheka pasi vaifanira haulla 5 hweunhu hunokosha. Kurishandisa somunhu mukuru mutungamiriri NOT achifanira kuongorora ndege.
4. Edza Too Hard
Saka imi akazosangana munhu waunoda, uri pamusoro musi naye uye unonzwa huta. Saka chii Unoita? iwe kutaura. Kana paine mukaha mumarudzi kukurukurirana kuzadza naro. Iwe zano kupi kuenda inotevera, iwe dazzle naye nengano dzisinganzwisisiki adventures wakambosangana, ndichimuratidza dzako ikapenya zvaiti uye une naye stitches pamusoro kusetsa yako. Uye chokwadi iwe kupa kubhadhara hafu kwaunoita zuva, kana zvichida iwe kunyange kuwana bhiri rose - uri mukadzi ano pashure zvose. Uye kuenda GREAT! Ari kuseka pamwe nemi, uye pane kubatana, unogona kuzvinzwa. asi, ipapo iye hariritumidzi. Anoenda chando uye haarambi pashure vaviri yemichindwe. Saka chii chakakanganisika?
Zvakanaka varume vakawanda vanosarudza kutora wokuratidza basa kufambidzana, uye kana muri kuita zvose kana mumwe kumusoro uri chaizvoizvo vachimusundira kunze basa iri, zvichireva uri zvomutadzisa achizadzwa mupfungwa paakapiwa mamuri. Evanhu kukwezvwa uye kuzvipira manzwiro kuti apingirishwa kana vachifanira kuisa vamwe nesimba. Unogona kufunga kuti uri kuva anokwezva uye hunokwezva Zvisinei haazombovi iwe kure kwenguva refu nevanhu vakawanda. Yaangafarira nguva newe, iye anogona seka newe uye panogona kuva zuva rechipiri, Zvisinei angangozova anopedzisira vakaita kuti mumwe munhu - mumwe 'zvokuvapfuura' mukadzi naye iye aifanira yadonhedzera nesimba.
Anofanira kuva munhu kutungamirira kurukurirano, yokuvaraidza iwe uye zvairatidza vakatozodzokera. Kana uchida anzwe ake kudzika kumurega kutungamirira uye kuva kwakasimba zvakakwana kuti kutevera. Sununguka uye kudzidzira kuva varipo uye vachinakidzwa chiitiko pachinzvimbo.
5. Iva An Ice Maiden
Kuva ice musikana ndiye pafiripi rutivi nokuedza zvakaoma. Vamwe vakadzi vanoziva nezvechikanganiso nhamba 4 uye saka tora kuti rimwe divi uye tisanyanya ushamwari uye isina. Kunyange zvazvo vangave kuenda 'zvakaoma kuwana' uye 'hwaikosha', kana kutora kure izvi zvinogona kuuya kure kuti muri nezviri, isina, venga uye kunyange snobby. Inogona unzwe inotonhorera vanhu vakawanda, uye varume vakawanda uchakukundisa nekukurumidza vakanaka chete ice musikana, kunze vaya chete kufarira dambudziko achitevera, uye iwe haudi kwakadai murume sezvo iye zvichida kudonhedza imi kamwe achitevera ari pamusoro uye kutamira kune imwe mukadzi.
Panofanira kuva pakati nepakati akaradzikwa shure / amuita kutungamirira uye ichiri vanofarira uye pachena. Kana uchigona kuwana ichi nepakati chaipo uchava nguva huru nokufambidzana nomumwe. Chinhu chikuru kurangarira anongotaurwa kuva pachako. Get chaizvoizvo simba mukati pachako uye vawane hwomutambarakede nemumba ganda rako. Dating kunogona chaizvoizvo kukubatsira ichi!
Saka endai kubuda imomo uye kupfuura zvose Musabvisa kudanana zvakare pachake. Hauzivi chii chiri kuitika kuti mumwe munhu. Itirawo saizvozvo mafaro 'tsika' uye achashanda kwauri.